Momba ny mpiasa - Lemur Conservation Network
Momba ny varika tsara ho fantatra
You are here: Home › Momba ny Lemur Conservation Network › Momba ny mpiasa
Ny Lemur Conservation Network (LCN) dia ary noho ny asa mafy sy ny fadanvan-tenan’ireto olona tanisaina manaraka ireto, izay miasa an-tsitrapo eto anivon’ny LCN. Ny sary fahanfatarana sy ny famolavolana ny tranonkala kosa dia nataon’ny orinasa mpanohana anay Art Monkey ary ny fampiantranoana ny tranonkala misy anay kosa dia fanomezana avy amin’ny Bristol Zoological society.
Amin’ny maha talen’ny Lemur Conservation Network, Lucia Rodriguez dia mampahafantatra hatrany ny LCN ary mampiroborobo ny asa fiarovana ny gidro eo amin’ny sehatra nasionaly sy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ataony amin’ny alalàna ny famoronana, fanabeazana, fanofanana, fizarana ny zava-misy sy ireo tsara ho fantatra izany. Izy no miandraikitra ny fifaneraserana rehetra, indrindra fa eto amin’ny tranokala. Izy ihany koa no manoratra ireo hafatra any amin’ny tambazotra sosialy toy ny Facebok ary mamorona ireo fitaovana entina ampianarana sy ampahafantarana ny tranokalan’ny LCN izay ampiasaina any amin’ny sekoly, lakilasy, toerana fitehirizana sy fitsidihana biby ary ho an’ny sarambaben-bahoaka. Lucia dia mandray ireo zava-misy sy tsara ho fantatra rehetra eto amin’ny tranokala ary mandrindra ny fifandraisana amin’ireo fikambanana sy ireo olona rehetra mety liana amin’ny fandaharan’asa eto amin’ny LCN. Manoratra ireo bilaogy sy momba ireo ezaka rehetra atao eo amin’ny sehatra nasionaly sy maneran-tany amin’ny fiarovana ny gidro ho an’ny tranokala sy ny tambazotra sosialy eto amin’ny LCN izy.
Mpandrindra ny Fanentanana eny anivon’ny fiaraha-monina
Fabiola no manampy an’i Seheno amin’ny famolavolana sy fanantontosana ireo lohahevitra sy resaka marosamihafa eto anivon’ny tranonkala /vohikala momba ny Gidro/Varika ho antsika Malagasy.
Teratany Malagasy ny tenany ary miasa sy monina any Wasghinton D.C. Niasa ary lehibe teo anivon’ny sehatry ny fizahan-tany izy. Niatomboka tamin’ny fitondrana ireo mpizaha tany tamina sambo mandritra ny 3 andro izany teny amin’ny Lakandranon’ny Pangalana iny. Tao aorian’izay dia lasa mpitondra mpizaha tany matihanina izy ary nitondra ireo mpizaha tany nitety an’i Madagasikara. Tao aorian’izany dia nanokatra orinasa mpitondra momba ny fizahan- tany izy.
Mpanolotsaina amin’ny resaka tetik’asa
Dr. Jonah Ratsimbazafy dia teratany Malagasy ary manana ny mari-pahaizana PhD momba antropolojia momba ny toe-batana avy amin’ny State University ao New York ao amin’ny Stony Brook, ETAZONIA .Izy no Sekretera Jeneralin’ny ny Primate Malagasy Group (GERP) sy Profesora (mpampianatra) Mpanampy ao amin’ny Sampam-pianarana momba ny Siansa sy ny Sampan-draharahan’ny Fitsaboana fitsaboina momba ny biby ao amin’ny Oniversiten’i Antananarivo, ary mpitarika mahafatra-pon’ny CITES izay miara-miasa akaiky amin’ny Fitantanana Jeneraly ny ala eto Madagasikara.
Ireo mpanao bilaogy mahafatra-po Malagasy
Raharijaona Vola Tiana
Mpisera no asany ary tao antain’izay folo taona mahery niasany tao anatin’izany tontolon’ny fizahan-tany izany no nahatsapany fa ilaina ny fiarovana ny tontolo iainana raha tsy tiana ny ahalany tamingana ireo biby sy zava-maniry tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Folo taona nitetezana faritra maro teto Madagasikara, nahitana ny fifandraisan’ny olona sy ny tontolo manodidina azy, folo taona niezahana nandresy lahatra ireo Malagasy namany fa tsy hananam-piry ny ala ka tokony harovana.
Izany no nanosika azy hiara-miasa amin’ny Lemur Conservation Network. Mba tiany ny handray anjara amin’ny fiarovana ny gidro sy ireo biby hafa miaina eto Madagasikara. “Maro ny Malagasy no tsy mbola tonga saina ny amin’ny maha-zava-dehibe ny ala sy maha-harena sarobidy ireo zava-maniry sy biby monina ao aminy. Fomba iray ahafahako mandresy lahatra ireo Malagasy namako ny lahatsoratra izay hozaraiko ao amin’ny bilaogy.” hoy ny tenany.
Randrianasy Roger Pascal
Mpamily sy mpitari-dàlana mpizaha tany taloha ny tenany ary mbola mieriteritra ny hiveriny amin’izany. Mpandala ny tontolo iainana koa izy ary sarotiny ny amin’ny fiarovana izany ka izany no mahatonga azy hanetanana ny tsirairay hiaro izany mba ho lovan’ny taranaka fara aman-dimby any aoriana.
Mpiandraikitra momba ny tontolo iainana ny tenany ary efa ho dimy taona izao no nanatontosan’izany asa izany. Amin’ny alalan’ny fanaovana fanadihadiana ny mety ho fiantraikan’ny fahasimban’ny tontolo iainana ary ny fanaraha-maso ireo drafitra sy fomba entina hitantana ny tetik’asa momba ny tontolo iainana no tena anisan’ny imasony. Nianatra momba ny toekarena , sokajy toekarana iombonana sy ny tontolo iainana teny amin’ny anjery manontolon’ i Antananarivo ny tenany.
Liana amin’ny fiarovanana ny gidro/varika sy ny zava-boahary izay harena goavan’i Madagasikara ny tenany. Mipetraka ao Genève (Suisse) izy ary mandrindra hetsika fampahantarana ny ankizy momba ny gidro sy ny zava-boahary kanto mampiavaka an’ i Madagasikara . Ankoatr’izany dia manana traik’efa manokana amin’ny fikarakarana atrik’asa sy fampiratiana momba ireo gidro any Genève (Suisse) izy ary tompon’ny CattaMada World. Manana mari-pahaizana mikasika ny fampadrosoana avy amin’ny “the Graduate Institute” any Genève ny tenany ary matihanina eo amin’ny sehatry ny fanamboarana tranonkala.
Mpitantana sy Mpandrindra ireo foto-drafitr’asa sy Talen’ny fanajariana.
Lynne namorina sy namolavola marika manokana ahafantarana ny LCN. Izy ihany koa no mitantana sy mandrindra ireo foto-drafitr’asa maro samihafa eto amin’ny Lemur Conservation Network, ary manara-maso ny fanatanterahana ny fiheverena sy ny tanjona izay iombonantsika mpanohana sy mpiara-miasa amin’ ity tambazotra ity izay mifantoka manokana amin’ny fiarovana ireo gidro/varika .
Lynne ihany koa dia nanangana orinasa fanajariana iray izay fantatra amin’ny anarana hoe Art Monkey tamin’ny taona 2001, izay eto Washington DC no misy azy. Mamorona sy mamolavola anjara marika ( marque ), tranonkala samihafa sy fitaovana hay varotra isan-karazany ho an’ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa sy ny orinasa madinika dia anisan’ny asany avokoa. Tsy vitan’izany anefa fa dia miara-miasa ihany koa amin’ny fanamboarana ireo tranonkala ho an’ny mpanjifa eo anivon’ny famoaham-boky sy ny fitondram-panjakana any an-toerana izy.
Tamin’ny taona 2013-2014 koa dia nanolo-tena hanampy tamin’ny « Ladybug project » izy. Niara – nanoratra tamin’i Kim Reuter ihany koa momba ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara izay mitondra ny lohateny hoe « Education in Madagascar ». Izy io dia boky mirakitra ireo fombà sy toro-lalana eny anivon’ny ambaratongam-pianarana izay misy eto amintsika ary manolotra ireo heverin’izy ireo fa tokony ahitsy sy ireo paik’ady amin’ny fanantanterahana izany.
Talen’ny Fanentanana sy ny Lohahevitra ao anatin’ny tranonkala sy ireo haino aman-jery sosialy.
Kim dia mandrary sy mitantana ireo zavatra rehetra misy sy voaresaka ao anatin’ny Lemur Conservation Network. Mba ahatontosana sy hamolavolana izao tambazotra izao dia niresaka sy nitady fiaraha-miasa tamina mpikaroka sy fikambanana aman-jatony izy ka izay voalazan’izy ireo no natambany ary noraiketiny ho ato amin’ity tranonkala ity sy ireo haino aman-jery sosialy maro samihafa.
Kim ihany koa dia sady matihanina biolojika no sady liana momba ny fampandrosoana iraisam-pirenena. Noho izany dia tsy nisalasala izy nampiasa ny fahaiza-manaony mba hampisy fiantraikany tsara teo amin’ny fiaraha-monina : tamin’ny alalan’ny fitsaboana, fanabeazana, ary ny hetsika fiarovana maro samihafa. Amin’izao fotoana izao dia mbola manohy ny fiaraha -miasa miaraka amin’ny « Moore Center » izay miresaka momba ny Siansa sy ny ranomasina ao amin’ny « Conservation International » any Washington, DC izy.
Izy ihany koa no Tale Lefitra eto Madagasikara, ary Mpandrindra ny« Red List Authority ». Ho fanampin’izany dia Filoha Lefitry ny sampana fikarakarana sy ny fitsaboana ary fiompiana ireo biby voasambotra eo anivon’ny « International Primatological Society » iihany koa izy ary mpitan-tsoratra mpanatanteraka ao amin’ny « Association pour l’Etude Européenne et Conservation de Lémuriens » izay fikambanana tandrefana (eropeanina) ary natokana hiaro sy hianatra ny gidro/varika.
Nanao fikarohana ihany koa i Cristoph vao haingana izay mifantoka tanteraka amin’ny ezaka sy fomba hataon’ireo gidro/varika maro izay voasokajy ho tandindomin-doza izay miady mafy ny ho velona manoloana ny fahasimban’ny toeramponenan’izy ireo, ny fisamatsamahana sy fisarahana eny anivon’izy ireo noho ny fitondrantenan’izy ireo tsirairay avy , ny fahazoana sakafo sy ny habetsahan’ny mponina (gidro/varika ny resaka eto) ary ny habetsahan’ny katsentsitra (PARASITE) ao anatin’izy ireny.
Isaorana mankana ireo olona rehetra izay nanampy tamin’ny fanatontosana ity tranonkala ity indrindra fa i Barry sirjon izay poeta Malagasy izay nanoro hevitra, ireo Malagasy mpiray tanindrazana mandala ny Fiteny Malagasy izay nanampy tamin’ny fanintsiany ny tsipelina ary ihany koa i Anita Yantz izay nanome alàlana ny ampiasana ny ankamaroan’ireo sary gidro/varika misy eto amin’ny tranonkala.